केप टाउन Info. About. What's This?
ⓘ केप टाउन
दक्षिण अफ्रिकी संसदको एक कोटा पाएको यो सहर दक्षिण अफ्रिकाको व्यवस्थापिकाको राजधानी पनि हो। यसले केप टाउन महानगरपालिकाको केही भाग ओगटेको छ। केप टाउन पानी जहाजहरूको अड्डा हार्बर, केप वानस्पतिक क्षेत्रको प्राकृतिक अवस्था र टेबल पहाड तथा केप पोइन्ट जस्ता स्थानहरूका लागि प्रख्यात छ। सन् २०१४ को एक तथ्याङ्क अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा यो सहर अफ्रिका महादेशभरिमा दसौँ स्थानमा पर्दछ भने पश्चिम केपमा बसोवास गर्ने मानिसहरू मध्ये ६०% मानिसहरू यहाँ बस्ने गरेको पाइन्छ। यो सहर विश्वभरका बहुसांस्कृतिक सहरहरू मध्ये एक हो। विभिन्न देशहरूबाट आप्रवासी वा प्रवासी भएर दक्षिण अफ्रिका प्रवेस गर्नेहरूको प्रमुख गन्तव्य भएको हुनाले पनि यहाँ सांस्कृतिक विविधता भएको हो। सन् २०१४ मा औद्योगिक सर्जकहरूको समाजको अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्ले केप टाउनलाई त्यस वर्षको लागि वर्ल्ड डिजाइन क्यापिटलको उपाधि प्रदान गरेको थियो। सोही वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाकोको न्युयोर्क टाइम्स र बेलायतको डेली टेलिग्राफ पत्रिकाले यो सहरलाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सूचीकृत गरेका थिए।
अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य अनुसार केप टाउनको फिस होकमा रहेको पिअर्स गुफामा सबभन्दा पुरानो मानव वस्तीका अवशेषहरू फेला परेका छन्। ती अवशेषहरू करीब १५००० देखि १२००० वर्ष पुराना भएको विश्वास गरिन्छ। लिखित इतिहासको अभावका कारण प्राचिन समयमा यहाँ पहिलो पटक बसोवास गर्ने मानिसहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध छैन। सन् १४८६ मा पोर्चुगलका खोजकर्ता बार्तोलोमेउ दियासले यो क्षेत्रलाई पहिलो पटक उल्लेख गरेका थिए। केप टाउनमा पुग्ने पहिलो युरोपेली व्यक्ति बन्न सफल उनले यसको नाम आँधीहरूको अन्तरीप अङ्ग्रेजीमा केप अफ स्टोर्म/पोर्चुगाली भाषामा काबो दास तोर्मेन्तास राखे। पछि पोर्चुगल कै जोन द्वितीयले यस स्थानको नाम अङ्ग्रेजीमा केप अफ गुड होप पोर्चुगाली भाषामा काबो दा बोआ इस्पेरान्सा राखे। केप टाउन हुँदै भारत र पूर्वी एसियाको समुन्द्री यात्राको बाटो खुलेका कारण समुद्री यात्रीहरूमा नयाँ आशा पलाएको भन्दै उनले यो नाम राखेको विश्वास गरिन्छ। ख्यातिप्राप्त खोजकर्ता भास्को दा गामाले सन् १४९७ मा आफूले केप अफ गुड होप देखेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। सोर्हौं सताब्दीको अन्त्यतिर भारत वा पूर्वी एसियाली देश जाने पोर्चुगलका सबै तथा फ्रान्स, बेलायत, नेदर्ल्यान्ड र डेन्मार्कका केही जहाजहरू टेबल खाडीमा रोकेर जाने गर्दथे। यस स्थानमा रहेको बेलामा युरोपेली मानिसहरू आदिवासी खोइखोई समुदायका मानिसहरूसँग सुर्ती, तामा तथा फलामसँग ताजा मासु साटेर लैजाने गर्दथे।
सन् १६५२ मा जन भान रिबिक तथा डच इस्ट इन्डिया कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरूलाई केप टाउनमा नेदरल्यान्डबाट भारततिर जाने पानीजहाजहरूका लागि बिसौनी तथा फोर्ट डि गोइडी हुप पछि क्यासल अफ गुड होप भनिएको नामको किल्ला निर्माण गर्न पठाइयो। सुरुका दिनहरूमा यो वस्ती बिस्तारै बढ्यो किनकी त्यतिबेला सहर बिस्तारको लागि कामदारहरू पाउन मुस्किल थियो। यही कामदार अभावलाई पूरा गर्न युरोपेली अधिकारीहरूले इन्डोनेसिया तथा माडागास्करबाट दासहरू आयात गर्न थाले। तिनै दासहरू मध्ये केही हाल केप टाउनमा अस्तित्वमा रहेका केप कलर्ड समुदायका पुर्खाहरू थिए। भान रिबिक तथा उनका उत्तराधिकारीहरूले नेदरल्यान्ड सेनाको प्रतिनिधि र पछि गभर्नरका रूपमा यहाँ रहँदा धेरै उपयोगी वनस्पतिहरू अन्य स्थानहरूबाट केप टाउनमा भित्राए। जसले गर्दा यहाँको प्राकृतिक वातावरण सदाका लागि परिवर्तन भयो। उनीहरूले ल्याएका मध्ये अङ्गुर, अन्नबालीहरू, बदाम, आलु, स्याउ र सुन्तला परिवारका फलहरूले यस क्षेत्रको समाज तथा अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण तथा दिगो प्रभाव पारेको पाइन्छ।
तत्कालिन डच रिपब्लिक नेदरल्यान्ड फ्रान्सको अधिनमा पुगेर बाताभियन रिपब्लिक भएको बेलामा बेलायतले नेदरल्यान्डका उपनिवेसहरू हत्याउन थाल्यो। यही क्रममा सन् १७९५ मा बेलायतले केपटाउनमाथि कब्जा जमायो। तर सन् १८०३ मा भएको सन्धीमा बेलायतले केप टाउन नेदरल्यान्डलाई नै फिर्ता दियो। सन् १८०६ मा बलाउबर्गको युद्धपछि बेलायती सेनाले केप टाउनमाथि पुन: कब्जा जमायो।
तत्कालिन डच रिपब्लिक नेदरल्यान्ड फ्रान्सको अधिनमा पुगेर बाताभियन रिपब्लिक भएको बेलामा बेलायतले नेदरल्यान्डका उपनिवेसहरू हत्याउन थाल्यो। यही क्रममा सन् १७९५ मा बेलायतले केप टाउनमाथि कब्जा जमायो। तर सन् १८०३ मा भएको सन्धीमा बेलायतले केप टाउन नेदरल्यान्डलाई नै फिर्ता दियो। सन् १८०६ मा बलाउबर्गको युद्धपछि बेलायती सेनाले केप टाउनमाथि पुन: कब्जा जमायो। पछि सन् १८१४ मा भएको अङ्ग्रेज-नेदर्ल्याड सन्धीपछि केप टाउन स्थायी रूपमा बेलायतको हातमा पुग्यो। त्यसपछि यो सहर बेलायतीहरूले भर्खरै स्थापना गरेको केप उपनिवेसको राजधानी बन्यो। उन्नाइसौँ सताब्दीभरी केप उपनिवेसको सीमाना उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। सिमाना बढेसँगै यस उपनिवेस बेलायतको अधिनबाट मुक्त हुनु पर्छ भन्ने मागहरू पनि बढ्न थाले। फलस्वरूप केप उपनिवेसले सुरुमा सिमित कार्यकारी अधिकार हुँदै सन् १८५४ मा आफ्नो अलग संसद् तथा सन् १८७२ मा स्थानीय प्रधानमन्त्री पायो। केप क्वालिफाइड फ्रान्चाइज नाम दिएको प्रणालीबाट हुने निर्वाचनमा जातीय विभेद नगरिएको भए पनि त्यतिबेला पुरुषहरूले मात्र मतदान गर्न पाउँथे।
सन् १९४८ मा भएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेसनल पार्टीले अस्वेत आतंक अफ्रिकन भाषामा स्वार्ट गेभार भन्ने जातीय नारा उचालेर विजय प्राप्त गर्यो। त्यस पश्चात बिस्तारै केप टाउनमा प्रचलनमा रहेको बहुजातीय सहभागीतामुलक निर्वाचन प्रणालीलाई खुम्चाउँदै अन्त्यमा समाप्त पारियो। समुदाय क्षेत्र कानुन लागू गरेर विकसित इलाकाहरूमा गोराहरू मात्र बसोवास गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो। पहिला बहुजातीय मानिएका सहरका विभिन्न इलाकाहरूबाट अस्वेतहरूलाई गैरकानुनी वासिन्दा बनाएर निकाला गरियो भने केही बस्तीहरू नै नष्ट गरियो। यसको कुख्यात उदाहरणको रूपमा केप टाउनको डिस्ट्रिक्ट सिक्सलाई लिन सकिन्छ। सन् १९९५ मा गोराहरूको क्षेत्र घोषणा गरिएपछि त्यहाँ भएका सबै घरहरू भत्काइयो र साठी हजारभन्दा बढी अस्वेतहरूलाई त्यहाँबाट बलपूर्वक हटाइयो। यी मध्ये धेरै अस्वेतहरूलाई केप फ्ल्याट्स तथा लेभेन्डर डाँडामा लगेर राखियो। जातीय विभेदको यो कानुन लागू भएको बेलामा केप टाउनमा गोरा बाहेक एसियालीमूलका मानिसहरूलाई मात्र काम दिने प्रचलन थियो। बान्तु जस्ता अफ्रिकी अस्वेतहरूलाई कसेले पनि काममा राख्दैनथे।
केप टाउन जातीय विभेदविरुद्ध लागेका धेरै राजनितीज्ञहरूको वासस्थानको रूपमा रहेको थियो। सहरबाट करीब १० किलोमिटर ६ माइल टाढा रहेको रोबेन टापुमा पहिले गम्भीर अपराधिहरूलाई राखिन्थ्यो। त्यहाँ रहेको कारागारमा धेरै प्रख्यात राजनितीज्ञहरूले वर्षौँसम्म बन्दी जीवन बिताएका थिए।
सन् १९९० को फेब्रुअरी ११ मा नेल्सन मन्डेलाले केप टाउन सिटी हलको बार्दलीबाट जनतालाई गरेको सम्बोधन जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनमा लागेकाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण क्षण मानिन्छ। थुना मुक्त भएको केही घण्टापछि गरिएको उक्त सम्बोधन मन्डेलाको लामो काराबासपछिको पहिलो थियो। उनको भाषणलाई दक्षिण अफ्रिकाको इतिहासमा नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा लिने गरिन्छ। यसको चार वर्षपछि सन् १९९४ को अप्रिल २७ मा पहिलो प्रजातान्त्रिक चुनाव सम्पन्न भयो। केप टाउनको भिक्टोरिया एन्ड अल्फ्रेड वाटरफ्रन्टमा अवस्थित नोवल स्क्वायरमा दक्षिण अफ्रिकाका चार नोवेल पुरस्कार विजेताहरूको सालिक राखिएको छ। सन् १९९४ देखि नै यो सहरले लागुपदार्थ दुर्व्यसन तथा यसका कारणले पैदा हुने अपराधको समस्या झेलिरहेको छ। केप टाउनमा हाल आएर अपराधिक समूहका बिच हुने झडपले ठूलो समस्या पैदा गरेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ पर्यटन उद्योग तथा घरजग्गाको कारोबारमा प्राप्त भएको सफलताले देशको अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। केप टाउनलाई दक्षिण अफ्रिकाभरमा सबैभन्दा धेरै समानता दर भएको सहरको रूपमा लिने गरिन्छ।
केप टाउन ३३.५५ डिग्री दक्षिणी अक्षांश सिड्नी र ब्युनस आयर्सको हाराहारीमा तथा भूमध्यरेखादेखिको दूरीका आधारमा उत्तरी गोलार्धमा रहेका कासाब्लाङ्का र लस एन्जलसको समान दूरीमा तथा १८.२५ डिग्री पूर्वी देसान्तरमा अवस्थित छ। यो सहरको सबैभन्दा नजिकको उच्च स्थानको रूपमा टेबल पहाड रहेको छ जसको उचाइ करीब १००० मिटर ३,३०० फिट छ। यो पहाडको किनारामा चट्टानी भिर भए पनि टुप्पामा समतल भूभाग भएकोले यसको आकृति टेबल जस्तै छ। टेबल पहाडको दाया-बाया रहेका राक्षसको पहाड र सिंह टाउके पहाडले केपटाउनको मध्य भागलाई वरीपरीबाट घेरेको भएर केहीले यसलाई सिटी बोल भन्ने गरेको पाइन्छ। कहिलेकाहीँ पातलो बादलले टेबल पहाडलाई ढाक्यो भने त्यसलाई स्थानीयहरूले टेबल ढाक्ने कपडाको संज्ञा दिने गरेका छन्। केप टाउनको दक्षिणमा पहाडी भूबनौट भएको केप प्रायद्वीप आन्ध्र महासागरमा करीब ४० किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। पहाडी मनोरम दृष्यले भरिपूर्ण यो प्रायद्वीपको पुच्छारमा केप पोइन्ट रहेको छ। केप टाउन सहरको आधिकारिक सीमा क्षेत्रभित्र ३०० मिटर ९८० फिट अग्ला ७० वटा ससाना डाँडाहरू छन्। यस सहरका प्रायजसो बस्तीहरू केप फ्ल्याट्स भनिने विशाल फाँटहरूमा रहेका छन्। केप टाउन सहरको आधिकारिक सीमा क्षेत्रभित्र ३०० मिटर ९८० फिट अग्ला ७० वटा ससाना डाँडाहरू छन्। यस सहरका प्रायजसो मानव बस्तीहरू केप फ्ल्याट्स भनिने विशाल फाँटमा रहेका छन्। यो समथर भुमि ५० किलोमिटर पूर्वसम्म फैलिएको छ। यसले केप प्रायद्वीपलाई अफ्रिकाको मुख्य भूभागसँग जोडेको छ। यो क्षेत्रको हावापानी सामान्यतया भूमध्य सागरीय क्षेत्रको जस्तो छ। फैलिएको तटीय क्षेत्र, बिच भूभागमा रहेका उपत्यका तथा लगभग मरुभूमी जस्तै भूभागहरूले घेरिएको केपटाउन दक्षिणी क्यालिफोर्निया जस्तै लाग्छ।
2.1. भौगोलिक अवस्था रोबेन टापु
हाल यो स्थानमा जान पर्यटकहरूका लागि डुङ्गा सेवा सञ्चालन गरिएको छ। रोबिन टापु सङ्ग्रहालयद्वारा सञ्चालित डुङ्गा सेवा व्यस्त मौसम सुरु नभइञ्जेलसम्म सेप्टेम्बर १ दिनको तीन पटकमात्र चलाइन्छ। डुङ्गाहरू भिक्टोरिया एन्ड अल्फ्रेड वाटरफ्रन्टमा अवस्थित नेल्सन मन्डेला गेटवेबाट लाग्ने गर्दछन्।
Wikipedia: केप टाउन